Rastrabani.com | » किन हिट भईरहेको छ थानेश्वरको गजल गीत ‘बेचेर सपना मैले’ ? किन हिट भईरहेको छ थानेश्वरको गजल गीत ‘बेचेर सपना मैले’ ? – Rastrabani.com
काठमाडौं।नेपाली गजल गायनको दुनियामा फरक शैलीमा प्रस्तुत हुने गायक थानेश्वर गौतमको नयाँ गजल गीत ‘बेचेर सपना’ यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । भिडियो शेयरिंग प्लाटफर्म यूट्युब र टिकटकमा धेरै सुनिने र देखिने गीतमा केहि दिनयता ‘बेचेर सपना’ पर्दछ । यो गीत यूट्युब ट्रेन्डिंगमा समेत अग्र पंक्तिमा रहेको छ ।